Nepal Samaya | मतदान गर्ने दिन पानी पर्ने प्रक्षेपण, एन्फा विवाद छानबिन गर्न कमिटी गठन [२०७९-१-२५]
मतदान गर्ने दिन पानी पर्ने प्रक्षेपण, एन्फा विवाद छानबिन गर्न कमिटी गठन [२०७९-१-२५]
नेपाल समय | काठमाडौं, आइतबार, वैशाख २५, २०७९
आइतबार, वैशाख २५, २०७९, काठमाडौं
काठमाडौं- आइतबारका मुख्य घटनासहितको नेपाल समय समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हाल्न स्वदेश फर्कन थाले भारत पुगेका नेपाली, मतदानका दिन मुलुकभर वर्षा हुने अनुमान गरिएकाले सुरक्षित रहन मौसमविदको सुझाव। मतदानका दिन वर्षा!
रेणुलाई फेरि भोट हाले प्रचण्डका आफन्तलाई कांग्रेसले २० वर्ष बोक्नुपर्ने ओलीको चेतावनी, प्रचण्डले धम्की दिँदैमा देश दुर्घटनामा नजाने बरु गठबन्धनले हार्ने टिप्पणी। प्रचण्डलाई ओलीको उत्तर
राजावादीको गठबन्धनले चुनाव जिते देशमा राजनीतिक दुर्घटना हुने प्रचण्डको चेतावनी, गठबन्धनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता कांग्रेसलाई भएको देउवाको तर्क। प्रचण्डका चेतावनीका शृंखला
पूर्वसुरक्षा प्रमुख जोन लीलाई बेइजिङले छान्यो हङकङको नयाँ नेता, लोकतान्त्रिक प्रदर्शन दबाउने लीले विस्थापन गर्दै क्यारी लाम। हङकङमा नयाँ नेता
मुख्य प्रशिक्षक र खेलाडीको विवाद छानबिन गर्न एन्फाले गठन गर्‍यो कमिटी, सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्न ७ दिनको समयसीमा। विवादपछि छानबिन
भारतबाट घर फर्कने नेपाली बढे
आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छिमेकी देश भारतमा श्रमका लागि पुगेका नेपालीहरू फर्कने क्रम बढ्न थालेको छ।
कञ्चनपुरको पश्चिमी सीमानाका गड्डाचौकीबाट घर फर्कने नेपालीको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेको हो। गड्डाचौकी नाकाबाट अन्य दिन प्रतिदिन १ सयदेखि २ सय नेपालीहरु भारतबाट फर्किने गरेको भएपनि अहिले त्यो संख्या बढेर दिनमा ५ सय भन्दा माथिको संख्यामा घर फर्किरहेका छन्।
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज विकास भट्टले अहिले दिनमै ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म मानिसहरु नेपाल फर्किरहेको र यो संख्या बढीरहेको जानकारी दिएका छन्।
भारतबाट नेपाल फर्कने नेपालीहरुको संख्या बढेपछि नेपाली नागरिकको डाटा संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढीरहेकोले नेपाल आउनेहरुले अनिवार्य ७ क्वारेन्टाइनमा बस्न र कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउन छुटेकाहरुले खोप लगायन तथा अनिवार्य स्वाथ्यका मापदण्डको पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
निर्वाचनका लागि घर फर्किएका उनीहरूले आफूले हालेको मतको कदर हुन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। उम्मेदवारले चुनावअघि विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएपनि चुनावपछि पहिलाका प्रतिबद्धता बिर्सिने गरेको र आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
दैनिक रुपमा भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेताहरुले जनाएको स्वदेशमै रोजगारीको प्रतिबद्धता भने चुनावपछि बिर्सिने गरेको स्वदेश फर्किएका नागरिकको दुःखेसो छ। रोजगारी समस्या सामाधान नहुँदा नागरिकले पुनः रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ भने नागरिकले दलमाथि विश्वास गर्न सकेका छैनन्।
निर्वाचनकै अर्को प्रसंगमा निर्वाचनको सुरक्षामा खटिएको समयमा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा उनीहरूका परिवारलाई २० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ। आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरीसहितका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी घाइते भएमा उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने जनाएको छ। त्यस्तै हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवान सरह रासन भत्ता दिने निर्णय समेत भएको छ।
उता स्थानीय तहको मतदानका दिन मुलुकभर वर्षा हुने मौसमविद्हरूले प्रक्षेपण गरेका छन्। यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई उनीहरुले सचेत गराएका हुन्।
बगांलको खाडीमा बैशाख २३ गते देखि उत्पन्न न्यून चापीय अवस्था आईतबारको दिन समुद्री आँधीको रुपमा विकसित हुँदै गएको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले आवश्यक पूर्वतयारी गर्न विज्ञहरुले सुझाएका हुन्।
जलवायुविद् डाक्टर धर्मराज उप्रेतिले आसानी नाम दिईएको यस आँधि निकै तिब्र गति मा चलेको जानकारी दिएका छन। नेपालमा भने बैशाख २८ गतेदेखि प्रभाव देखिने उनको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले भरतपुरको मेयरमा पुनः रेणु दाहाललाई भोट हाले २० वर्षसम्म प्रचण्डका आफन्त बोक्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
भरतपुरमा आयोजित एमालेको चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन्। उनले जिन्दगीभर कांग्रेस भएर हिँडेका कार्यकर्ताहरू माथि सहानुभूति रहेको समेत बताए।
सभामा उनले प्रचण्डले दिएको धम्कीको कुनै अर्थ नभएकोसमेत बताए। कसैले धम्की दिँदैमा दुर्घटना नहुने बरु गठबनध्नले नराम्ररी हार्ने उनको भनाइ छ। ओलीले निर्वाचन आयोगप्रति पनि रोष प्रकट गरेका थिए। प्रचण्डले तीन दिन अघि मात्र आफ्नो छोरी रेणुलाई भोट नदिए देश दुर्घटनामा जान सक्ने धम्की दिएका थिए।
भरतपुरमा हँसिया हथौडा चिह्नमा भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने धम्की दिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आज फेरि अर्को धम्की दिएका छन्।
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले पोखरामा आयोजना गरेको चुनावी सभामा उनले राजावादी संलग्न भएको गठबन्धनले चुनाव जिते देशमा राजनीतिक दुर्घटना हुने चेतावनी दिएका हुन्।
आफूले यसबारे बोल्दा मतदाता धम्क्याएको भनेर आलोचना भएको गुनासो पनि प्रचण्डले पोखे।
संविधानको रक्षा, गणतन्त्र र संघीयता पक्षधर भएकाले गठबन्धनको राजनीतिक मुद्दा पनि मिलेको प्रचण्डको दाबी छ। राजावादी शक्ति परास्त गर्न नसके देशमा राजनीतिक दुर्घटना हुने कुरा बताउँदा आफूलाई मतदाता धम्क्याएको आरोप आएको उनले दोहोर्याए। स्थानीय निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिमनबीचको लडाइँ भएको उनको दाबि थियो।
सभामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको बढी आवश्यकता कांग्रेसलाई भएको बताएका थिए। गठबन्धन बन्नुअघि कांग्रेसको अवस्था कस्तो थियो भनेर पनि उनले प्रश्न गरे। उनले कुनै हालतमा गठबन्धन जोगाउनैपर्नेमा जोड दिएका थिए।
देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको खिलाफमा रहेको आरोप लगाएका थिए।
गठबन्धनका पत्रकार अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण
सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आह्वानसहित वक्तव्य जारी गर्ने गठबन्धन दलआबद्ध पत्रकार संगठनका अध्यक्षहरूलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
आयोगले पत्रकारिताको क्षेत्रबारे प्रश्न उठाउँदै विज्ञप्ति हटाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पत्र काटेको छ।
शनिबार कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, माओवादी निकट प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, नेकपा एस निकट समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठसहितले पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आह्वान गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाकी मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंहले स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा काठमाडौंको मौलिक सभ्यता लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताएकी छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित बुद्धिजिवी भेला तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उम्मेदवार सिंहले काठमाडौं उपत्यकामा भएका मौलिक सभ्यता र परम्पराको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको बताइन्।
स्थानीय सरकारले राजनीति मात्र गरेका कारण मौलिक सभ्यता र सम्पदाहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेको सिंहको भनाई छ। आफु काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भएमा सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा विशेष ध्यान पुर्‍याउने उनले प्रतिबद्धा गरिन ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ कलाकार निर शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंहसँग अर्का उम्मेदवार केशव स्थापितको तुलना गर्न नमिल्ने राय राखे । सिंहलाई विगतमा सरकारले नजरबन्दमा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थापितलाई भने राजाले राज्यकोषको प्रयोग गर्न पाउनेगरी मेयर पदमा नियुक्त गरेको उनको आरोप छ । पार्टीको स्वार्थका लागि नै स्थापितलाई राजासँग गहिरो सम्बन्ध बनाउनका लागि उनको तत्कालिन पार्टीले सो पदमा पठाएको दाबि शाहले गरे ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा सिंहलाई विजयी गराउन शाहले आग्रह गरे ।
३ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु
सरकारले आगामी जेठ ३ गते बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ३ गते अपरान्ह ४ बजे बजेट अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
हरेक वर्षको जेठ १५ गते वार्षिक बजेट संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अघिल्लो वर्ष भने सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। पछि उक्त बजेटलाई सरकारले प्रतिस्थापन गरेको थियो।
खोप हुँदैन मतदानकेन्द्रमा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले छिमेकी मुलुकमा बढ्दो कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले निर्वाचनका दिन अतिरिक्त खोप केन्द्र तथा नियमित खोप अभियान सञ्चालन नहुने जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि मताधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले उक्त दिन खोप सेवा बन्द रहने मन्त्रालयले जनाएको हो। यसअघि मतदान केन्द्रमा नै खोप लगाउने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो।
हङकङका नेता चुनिए
हङ्कङका पूर्व सुरक्षा प्रमुख त्यहाँको नयाँ नेता चुनिएका छन्। बन्द मतदानबाट पूर्व सुरक्षा प्रमुख जोन ली हङ्कङको नयाँ नेता चुनिएका हुन्। चुनावमा उनी एक मात्र उम्मेद्वार रहेको बीबीसीले जनाएको छ।
बेइजिङका प्रखर समर्थक ली खासै लोकप्रिय नभएको र हालैको एउटा सर्वेक्षणमा १०० अङ्कमध्ये ३४ दशमलव ८ अङ्कमात्रै उनले ल्याएका थिए। तर सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष मताधिकार नरहेको हङकङमा त्यसको विशेष अर्थ नभएको लीलाई बेइजिङले चयन गरेको हो।
हङकङको नेता चयन गर्ने जिम्मेवारी एउटा १५ सय सदस्यीय समितिको रहेको हुन्छ जसमा लगभग सबै बेइजिङका समर्थकहरू छन्। तर यसपालि उनीहरूले एक मात्रै उम्मेदवारलाई छान्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो।
उनले सन् २०१७ देखि हङकङको प्रमुख कार्यकारी रहेकी क्यारी लामलाई विस्थापित गर्नेछन्। पूर्व मूख्य सचिव रहेका ली शहरका दोस्रो वरिष्ठ उच्च अधिकारी रहका थिए। क्यारी लामले दोस्रो कार्यकालका लागि नलड्ने बताएपछि उनी नै उनको उत्तराधिकारी बन्ने भएका हुन्।
लीले बेलाबेलामा हिंसात्मक समेत बनेका सन् २०१९ को लोकतन्त्र समर्थकहरूको प्रदर्शन नियन्त्रणको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
एन्फा विवाद कहिले मिल्ला?
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताईरी र बन्द प्रशिक्षण छाडेका खेलाडीबीचको विवादको सत्यतथ्य पहिचान तीन सदस्यीय कमिटि गठन गरेको छ।
ललितपर स्थित एन्फाको मुख्यालयमा आइतबार बसेको कार्यसमिति आकस्मिक बैठकले फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक र खेलाडीको विवादको सत्यतथ्य पहिचान गर्न आर्मीका पूर्व उपरथी तथा पूर्व खेलाडी भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा तनि सदस्य कमिटी गठन गरेको हो ।
कमिटीमा पूर्व खेलाडी बिदुर विष्ट र नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका उपाध्यक्ष दिपक थापा रहेका छन् । कमिटीलाई एन्फाले एक सातामा विवादको सत्यतथ्य सहित छानबिन गरेर एन्फालाई प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
एएफसी एसियन कप छनोटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीले मुख्य प्रशिक्षक अलमुताईरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै बैशाख १३ गते १० खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए ।
क्याम्प छाडेका खेलाडीले होटल सुविधाको माग राख्दा प्रशिक्षक अलमुताईरीले पटक पटक क्याम्प छाडेर जान भनेपछि आफुहरु बाध्य भएर प्रशिक्षण छाडेको बताउँदै आएका छन् । प्रशिक्षक अलमुताइरीले पनि क्याम छाडेका खेलाडीको स्थानमा नयाँ खेलाडीलाई स्थान दिँदै प्रशिक्षण गराई रहेका छन् ।
प्रकाशित: May 8, 2022 | 21:28:08 काठमाडौं, आइतबार, वैशाख २५, २०७९
तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षालाई बजेटमा प्राथमिकता, दुई स्थानमा सुरु भएन मतगणना [२०७९-२-८]
उता राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षालाई विशेष जोड दिइने बताएका छन्।
मौन अवधि तोड्न दलहरूको प्रतिस्पर्धा, मतदानको तयारी पूरा [२०७९-१-२९]
मौन अवधि तोड्न दलका नेता, उम्मेदवार, समर्थक र कलाकार अग्रपंक्तिमा, दलका कार्यकर्ताहरूबीच ठाउँठाउँमा झडप हुँदा उम्मेदवारसहित कैयौँ घाइते।
जेठ ७ गते नीति तथा कार्यक्रम आउँदै, हत्या आरोपमा माओवादी उम्मेदवार पक्राउ [२०७९-१-२८]
प्रवक्ता केसीले आसन्न निर्वाचनलाई भयरहीत, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउन विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेका र निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर सिसिक्यामेरा समेतको माध्यमबाट निगरानी गर्ने काम गरिरहेको बताए।
भोलिदेखि मदिराको बिक्रीवितरण प्रतिबन्ध, जिम्बावेविरुद्धको सिरिजमा नेपालको जित [२०७९-१-२६]
आर्थिक संकटसँगै हिंसा बढ्दै गएपछि श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री राजापाक्षेले दिए राजीनामा, विदेशी मुद्राको अभावबाट उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्न माग गर्दै प्रदर्शन जारी
रेणुपछि सिर्जनालाई भोट माग्न काठमाडौंमा सभा, आईपीओमा कोटा पाउँदै विदेशका श्रमिक [२०७९-१-२३]
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला तथा उच्च अदालतकै आदेश सदर गरेको छ।